Famantarana 5 mameno ny data MySQL | Martech Zone
Famantarana 5 mameno ny data-data MySQL-nao
Alatsinainy, May 4, 2015 Alatsinainy, May 4, 2015 Mike Azevedo
Ny tontolon'ny fitantanana angona dia sarotra ary mivoatra haingana. Tsy misy na inona na inona manasongadina an'io fivoarana io mihoatra ny fisian'ny 'fampiharana be' - na ny fampiharana izay manodin-tserasera ny fifandraisana an-tapitrisany isan-tsegondra. Factor ao amin'ny Big Data sy ny rahona, ary miharihary fa ny mpivarotra e-varotra dia mila andian-databatra vaovao afaka mahavita tsara sy mizana haingana kokoa.
Ny orinasan-tserasera rehetra tsy misy angon-drakitra nohavaozina dia toa mihazakazaka MySQL, tahiry iray zara raha nohavaozina hatramin'ny nanombohany tamin'ny 1995. Rehefa dinihina tokoa, ny teny hoe "NewSQL" dia tsy nanjary ampahany tamin'ny leksika nomerika mandra-pahatongan'i Matt Aslett, mpandalina ny 451 Group , namorona azy tamin'ny 2011.
Raha toa ka mahavita mitantana fifamoivoizana be dia be ny MySQL, rehefa mitombo ny orinasa dia mety hahatratra ny fahafaha-manana faran'izay betsaka ny tahiry ary hijanona tsy hiasa tsara ny tranokalany. Raha tsy azonao antoka ny fahavononanao na tsia ny database NewSQL, ireto misy famantarana dimy mety hihoarana ny MySQL:
Ny fikirakirana ny fahasahiranana dia mamaky, manoratra ary manavao - MySQL dia manana fetran'ny fahaiza-manao. Rehefa mihamaro ny mpanjifa mahavita fifanakalozana ao amin'ny tranonkalanao dia fotoana fohy fotsiny io alohan'ny hijanonan'ny database anao. Ankoatr'izay, rehefa mihabe ny enta-mavesanao, ary mahita fa sarotra ny fikirakirana famakiana sy fanoratana fanampiny, dia mety mila database hafa ianao. Ny MySQL dia afaka mamaky amin'ny alàlan'ny “read -udak”, saingy tokony ho mailo ny fampiharana fa tsy mifanaraka amin'ny mpamaky mpanoratra ny famakiana. Ohatra, rehefa manavao ny vokatra ao anaty saretiny e-varotra ny mpanjifa dia tokony hovakina avy amin'ny mpanoratra izany. Raha tsy izany dia atahorana ho diso ny habetsaky ny fampanantenanao raha diso ianao. Raha mitranga izany dia hanana tavoahangy tavoahangy amin'ny toerana ratsy indrindra ianao: ny lisitry ny fizahana e-varotrao. Ny bottleneck amin'ny checkout dia mety hiteraka sarety nilaozana, na ny ratsy kokoa, hivarotra enta-mavesatra tsy anananao ianao, ary tsy maintsy hifampiraharaha amin'ireo mpanjifa sosotra, ary mety ho fipoahan'ny media sosialy ratsy.
Slow Analytics ary ny fanaovana tatitra - Ny database MySQL dia tsy manome fotoana tena izy Analytics fahaiza-manao, ary tsy manome fanampiana ho an'ny fananganana SQL hafa. Mba hamahana io olana io, ny Multi-Version Concurrency Control (MVCC) sy ny Massively Parallel Processing (MPP) dia ilaina amin'ny fikarakarana ireo asa goavana satria mamela ny fanoratana sy Analytics hitranga tsy misy fanelingelenana, ary ampiasao teboka marobe sy cores maro isaky ny node mba hahatonga ny fangatahana an-tsokosoko handeha haingana kokoa.
Fiatoana tsy tapaka - Ny data MySQL dia namboarina tamina teboka iray tsy fahombiazana, midika izany raha toa ka tsy mahomby ny singa iray - toy ny drive, motherboard, na ny memory - dia ho diso ny database rehetra. Vokatr'izany dia mety hiaina fihenam-bidy matetika ianao, izay mety hiteraka fahaverezan'ny karama. Azonao atao ny mampiasa sharding sy andevo, saingy marefo ireo ary tsy mahazaka fivezivezena be. Ny tahiry an-tserasera dia mitazona kopian'ny data marobe, manome fandeferana ao anaty ary mitazona ny asa na eo aza ny / na tsy fahombiazan'ny kapila.
Sarany avo amin'ny developer - Ireo mpamorona miasa miaraka amin'ny tahiry MySQL dia matetika dia mila mandany ampahany betsaka amin'ny fotoanany amin'ny famahana ny olan'ny fantson-drano na ny tsy fahombiazan'ny database. Ny mpamorona miasa miaraka amina tahiry angona malalaka dia maimaimpoana fa tsy ny miasa amin'ny fampivelarana endri-javatra sy ny fanaovana ny vokatra haingana kokoa amin'ny tsena. Vokatr'izany, mihena ny fotoana an-tsena ary afaka mahazo fidiram-bola haingana kokoa ny orinasa e-commerce.
Mpizara mpizara - Ireo seriver mampihetsi-po amin'ny RAM mandritra ny fotoana maharitra, na matetika mandritra ny andro, dia famantarana lehibe fa tsy maharaka ny firoboroboan'ny orinasa MySQL. Ny manampy fitaovana dia ny fanamboarana haingana, nefa lafo ihany koa izy io ary tsy vahaolana maharitra. Raha nampiasa fomba fiasa mivelatra ny fikambanana, dia azo averina tahaka ny node ny angon-drakitra, ary rehefa mihabe ny habe sy ny habetsaky ny fifanakalozana dia afindra any amin'ny teboka hafa ao anaty ny data.
Mazava izany, ny MySQL dia misy fetrany, ary raha nomena fotoana sy fitomboan'ny fifamoivoizana, ny database MySQL rehetra dia voatery hiaina olana amin'ny fahombiazana sy ny fahamaotinana. Ary ho an'ny tranokala e-varotra, ireo tsy fetezana ireo dia azo antoka fa hidika amin'ny vola miditra tsy tratra.
Rehefa dinihina tokoa, tsy tokony hahagaga raha avy eo ny teknolojia iray natsangana roapolo taona lasa izay izay sahirana amin'ny fitohizan'ny tontolon'ny nomerika haingana ankehitriny. Eritrereto izany: ahoana no ahafahan'ny mpandahatra programa amin'ny 1995 mahita mialoha fa ho matanjaka tokoa ny Internet?
Tags: klopyfampisehoana databasetahiry ho avyMySQLtranokala MySQLfifandraisana MySQLmamaky ny MySQLfitaterana ny MySQLvaovao farany an'ny MySQLManoratra i MySQL
Mike no filoha & Lehiben'ny mpanatanteraka ao Clustrix. Mike dia manana traikefa momba ny varotra sy mpanantanteraka maherin'ny 25 taona amin'ny fampiharana an-tserasera, computing grid, fotodrafitrasa fitehirizana, fiarovana ary fivarotana.
Fitsipika 3 momba ny psikolojia amin'ny varotra sy marketing
Mpanjifa miatrika fitaovana sy ny fomba ahafahanao mivarotra amin'izy ireo